Zingaphi ii-h scrollnias kwii-ruble? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Zingaphi ii-ruble kwi-ruble?
Kwinqanaba lokutshintshiselana leBhanki ephakathi yeRussian Federation, i-ruble ukuya ruble ukusuka nge-4.12.2012 kaDisemba, i-1 UAH = 3.77 RUB. Kuya kufuneka uyazi ukuba ireyithi ihlala itshintsha kwaye utshintshe i-ruble kwi-ruble okanye i-ruble kwi-hryvnia ngeli nqanaba awunakuliphumelela. Rhoqo i-exchanger ibeka inani layo lotshintshiselwano.
Ukusukela nge-05.04.2015 ka-Epreli ngo-24,2536, iBhanki eyiNtloko yaseRussia ibeke inqanaba lokutshintshiselana nge-10 iiruble zaseRussia kwii-XNUMX ze-h hpnias zase-Ukraine.
Oko kukuthi, iyure enye ixabisa iindleko ezingaphantsi kwee-ruble ezi-2,5.
Ndifumana ulwazi olukhoyo apha.
Ndandihlala ndikholelwa ukuba i-ruble ineentsenti ...
Kwaye savela sivela kwiinkawu ...
Nantso into ethethwa yi-Intanethi- ungafumana yonke into)
Kuba ireyithi yokutshintshiselana iyunithi ayisoloko, ndicebisa ukusebenzisa itafile yokutshintshiselana kwemali kwiibhanki zase-Ukraine:
Ngokumalunga nexabiso lotshintshiselwano kwiibhanki zaseRussia, sebenzisa ulwazi kwiwebhusayithi apho unokufumana khona amaxabiso okutshintsha kweebhanki kunye neenkcukacha zazo.
Ngokomndilili namhlanje nge-30.01.2013/0,265/XNUMX kwi-ruble yaseRussia i-XNUMX hXNUMXnias kwinqanaba le-NBU
Ewe, abahambi abathandekayo kunye nabathandi boLwandle oluMnyama, baya kuqonda ukuba le mali ayizinzanga kakhulu, kuba xa ixesha lonyaka liqala ukukhula. Ngokubanzi, kwi-1 hryvnia = i-3,77 ruble, ngokulandelanayo, kwi-ruble eyi-1 ye-0,27 rubles. Ngokubanzi, ukuba ufuna ukuthenga imali engabizi kakhulu, ke ngokuqinisekileyo kuya kubakho iindawo ezifihlakeleyo zemali ecaleni kwebhanki, ukuze bathathwe ngexabiso eliphantsi, eyona nto iphambili kuqinisekisa ukuba akukho buxoki.
Zingaphi ii-h scrollnias zokuyihlikihla
Ngapha koko, iqondo lokutshintshiselana ngemali enye ngokuchasene nenye imali lihlala litshintsha. Izinga lokutshintshiselana nge-ruble ngokuchasene ne-ruble ayikho enye into. Indlela elula kakhulu yokufumana ikhosi yangoku kukusebenzisa iGoogle. Ukwenza oku, chwetheza kuGoogle:
I-ruble enye kwi-hhucnias
UGoogle undiphendulile: i-ruble eyi-1 Russian = 0.267507993 i-Ukraine hXNUMXni.
Ireyithi yokutshintshiselana nge-ruble ngokuchasene ne-ruble ihlala itshintsha, enyanisweni, njengoko kwenzeka ngayo nayiphi na enye imali kwintengiso. Ukuza kuthi ga ngoku, kwi-1 ruble yaseRussia eyi-0,2522 hryvnia. Oko kukuthi, i-ruble ezi-3,9654 ziyafuneka ukuze kuthengwe i-1 hryvnia. Ngendlela, ukuze ufumanise i-ruble yangoku kwixabiso lokutshintshiselana nge-hryvnia nangaliphi na ixesha, bhala lo mbuzo ulandelayo kwinkqubo yokukhangela mail.ru: quot; zingaphi ii-h scrollnias ezikwi-rublequot; nangaphambi kokuba iziphumo zokukhangela uzakubona umyinge ngqo weBhanki ephakathi.
Namhlanje, nge-2 kaJanuwari ngo-2013 kwi-ruble enye kuphela i-0,266 hryvnia. Kodwa eli nani liyatshintsha phantse yonke imihla, ukuze kufunyanwe inani elichanekileyo, ndincoma ukuba ufake isicatshulwa samagama amabini kwi-Yandex: i-ruble hryvnia. Kwaye uya kubona ngokukhawuleza isiguquli semali.
Zingaphi ii-h scrollnias kwii-ruble? ... kufanelekile ukuqwalasela ukuba ireyithi yokutshintshiselana nge-ruble ngokutshintsha kwamaxesha, oku kuthi kungasivumeli ukuba sitsho ngqo ukuba zingaphi i-h scrollnias nge-1 ruble yaseRussia. Singatsho kuphela oko kwi-ruble eyi-1/1 kwinxalenye ye-hryvnia.
I-ruble eyi-1 Russian ilingana ne-0.26528 hhucnias
I-1/4 i-hryvnia kwi-ruble ikrwada.
Enye i-ruble zinee-ruble ezi-4. Ewe olu luthelekelelo olunzima, kodwa kuqikelelo olubi kulungile.
Ukubala okunje kulungele ukuchaza amaxabiso kwii-ruble kwii-Ukraine. Ngoku kubonakala ngathi kwi-Intanethi, isi-8 kwezili-10 ezivela eUkraine.
E-Yalta nakunxweme loLwandle oluMnyama lwaseCrimea phakathi kuJulayi ngo-2011 kukho ikhosi: ii-ruble ezili-1000 zaseRussia kwindawo exchanger ezingama-280 grivnas (ngokomyinge). Ke, kwi-1 RUR yayingu-0,28 UAH, nakwi-1 UAH 3,57 RUB.
Ukuba kwakuyimfuneko ukutshintsha i-hryvnia ukuya kwi-RUB, umyinge ophakathi wawungu-285 UAH. nge-ruble eyi-1000. i.e. unikezela nge-UAH 285 kwi-exchanger - ufumana i-1000 RUB. T.O. ukusuka kwi-1 UAH uya kufumana i-ruble ezi-3,51, okanye uchithe imali ekuthengeni i-1 RUB 0,285 UAH.
Uninzi lweendwendwe aziliqondi kakuhle inqanaba lotshintsho olusetwe kubatshintshi, kuba aluchazwanga ukuba lingakanani inani lemali elityunjiweyo ebhodini eya kukhutshwa / ifunyenwe.
Inzuzo ngakumbi ukuthatha i-hryvnia e-Ukraine, kwaye uyise eRussia.
Kwiibhanki ezahlukeneyo ngeendlela ezahlukeneyo:
Isifundo sikhangeleka ngathi sinje-Kwi-hryvnia enye banika ii-ruble ezi-2,29.
Imibuzo ye-22 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,304.